Soo dejisan OpenOffice 4.1.1 – Vessoft
Comments on OpenOffice:
OpenOffice Software la xiriira:
LibreOffice 5.2.2 iyo 5.2.3 beta 1
Office Mid ka mid ah analogues hoggaamineed oo lacag la'aan ah Office Microsoft ah. Software wuxuu taageeraa qaabab ugu caansan si ay u gaaraan waafaqsan ugu badnaan la software kale xafiiska.
Office Tafatirka Text Tool si aad u hesho macluumaadka ku jira database ee maktabadaha iyo hay'adaha cilmi ah oo adduunka ah. Software wuxuu taageeraa .Wadashaqayntaas la maktabadda internetka ee adeegga.
Office fudud ayaa si ay u isticmaalaan software la set badan oo ah qalab iyo taageero ah qaabab file caan ah si ay u xalliyaan hawlaha kala duwan ee xafiiska.
English, Français, Español, Deutsch... Microsoft Office Excel Viewer 12.0.4518.1071 iyo 12.0.6320.5000
Office Software in uu ordo, aragtida iyo ku daabicin, miisaskii elektaroonik ah qaab Excel ah. Software ayaa u saamaxaaya in ay u arkaan in waraaqaha ee hababka kala duwan oo la beddelo faahfaahin qaar ka mid ah bogga.
English, Українська, Français, Español... Microsoft Office Word Viewer 12.0.6038.3000
Office Ku haboon qalab si aad u eegto, nuqul ka oo daabacan waraaqaha ee doc ama docx qaabab. Software ka shaqeeya iyada oo aan ku rakibidda Microsoft Word.
English, Українська, Français, Español... Polaris Office 7.1.425
Office software la files xafiiska of qaabab kala duwan u shaqeeyo oo uu leeyahay shaqeynta weyn oo ka kooban a habyaalada heli karo.
English, Français, Español, Deutsch... Recover My Files 5.2.1.1964
Files Tool inuu ka soo kabsado faylasha tirtiray ama laga badiyay. Software la shaqeeyaa nidaamyada file caan ah oo soo kabanayo files ku sidayaal macluumaad kala duwan.
Qabashada Screen Games Software functional in ay qabsadaan video ka shaashadda kombuyuutarka aad. Software waxaa ka mid ah algorithms gaar ah in laga hortago saamaynta ay ku xawaaraha codsiyada inta ay rikoor.
Graphics iyo design editor The graphic waayo, reer binu da'da xannaanada la set badan oo ah saamaynta iyo qalab. software The weheliyo tallaabo kasta by saamaynta dhawaaqa funny.
English, Українська, Français, Español... BriskBard 1.2
Kadib set A ee software-ka si ay u qabtaan hawlaha maalin kasta ee internet-ka. Ka mid ah software waxaa browser ah, email macmiilka, ciyaaryahan warbaahinta, macmiilka kala iibsiga xogta iwm
Horumarinta Calan biilasha waxtar leh in la abuuro server a web buuxda. Software ka kooban module ka mid ah xisaab faahfaahsan booqashada tirakoobka ee Webalizer iyo FTP-macmiilka FileZilla.
Saxannada Qalabka ayaa si defragment drive adag iyo faylasha gaar ah. Baaritaanadaas ayaa software iyo bandhigayaa warbixin ka faahfaahsan oo ku saabsan disc ah.
العربية, English, Українська, Français... TunnelBear 2.3.25
Programka sirta Internet Software ee shaqada ammaan ah oo fudud oo VPN server-. Sidoo kale software awood u si ay u helaan in ay goobaha u xiran yihiin.
Files riixo Archiver ayaa u awood badan oo taageero ah qaabab archive caan ah. Software ayaa awood u inuu ka soo kabsado buugagga taariikhda oo burburay iyo kuwa diinta in ay qaabab kale.
Horumarinta Nidaamka awood leh ka ah maamul database. Software wuxuu taageeraa noocyada kala duwan ee xogta iyo waxa ka mid ah qalab gaar ah jiilka la nidaamka SQL-code.